Loza mihatra ao Vatovavy Fitovinany ny orambe | NewsMada
Loza mihatra ao Vatovavy Fitovinany ny orambe
Mbola hitohy ny orambe ho an’ny faritra Vatovavy Fitovinany sy distrika maromaro ao amin’ny faritra Atsinanana sy Atsimo Atsinanana anio, araka ny filazana nalefan’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, omaly hariva. Nahazo filazana mena, manambara loza mihatra, noho izany, ny distrika rehetra ao amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany, miampy ny distrikan’i Mahanoro, Marolambo, Vondrozo, Farafangana ary Vangaindrano. Ahina ny fiakaran’ny rano sy ny fihotsahan’ny tany ka entanina ny mponina ho mailo.
Momba ny toetry ny andro, anio, ho an’ny tapak’andro hariva, hifandimby ny masoandro sy ny rahona amin’ny faritra Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe, Androy ary Anosy. Hanorana tandrifin-drahona arahin-kotroka sy mety ialohavana na arahina tafiotra
ny faritra sisa rehetra.
Ankoatra izay, ilain’ny mpisehatra samihafa amin’ny fihariana toy ny jono, fambolena, fizahantany ny vaovao momba ny toetry ny andro isan’andro. Efa manana milina afaka mikajy sy manome amin’ny fotoana rehetra ilana azy ny tondro rehetra avy amin’ny ivontoerana manokana (automatic weather station) AWS, i Morondava. Nampiofanina momba ny fikirakirana ny vaovao omen’ny AWS ny tomponandraikitra mila izany nanomboka, omaly ka hifarana anio any an-toerana.